नेपाल आउँदै दोहा बैंक, नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई के हुन्छ फाइदा? :: PahiloPost
नेपाल आउँदै दोहा बैंक, नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई के हुन्छ फाइदा?
काठमाडौं : वेलायतको दि बैंकर पत्रिकाले बेस्ट रिजनल कमर्सियल बैंकको अवार्ड दिएको कतारको दोहा बैंक नेपाल आउने भएको छ। नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको बैंकले कर्मचारी छनौटसमेत सुरु गरिसकेको छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि हामीले कतारको सबैभन्दा ठूलो बाणिज्य बैंक दोहा बैंकलाई प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइसकेका छौं' नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले भने, 'यसले नेपालका बैंकहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार विस्तारका लागि सहजीकरण हुन्छ।'
नेपाल आउँदै दोहा बैंक, नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई के हुन्छ फाइदा? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।